Tani waa alaabta amniga si looga hortago weerarrada foosha xun, xakamaynta bogagga khatarta ah, ka hortagaan hanjabaadaha internetka iyo e-boostada.
"ESET NOD32 Antivirus" – waa badbaado amaan ah iyo xasaasiyad si loo ilaaliyo asturnaanta iyo amniga gurigaaga PC ee noocyada kala duwan ee weerarada.
Baidu Antivirus – waa barnaamij ka hortaga fayraska si loo helo oo loo tirtiro faylalka waxyeelada leh. Software-ka wuxuu adeegsadaa matooriyaal kala duwan oo kala duwan si uu u ilaaliyo aagag kala duwan oo nidaamka ah.
ComboFix – hab ku habboon oo lagu helo ama lagu tirtiro xogta halista ah. Antivirus-ku wuxuu ogaadaa halista ugu badan ee nidaamka wuxuuna ku soo bandhigayaa warbixin faahfaahsan.
Avira Security Security Suite – set oo ah aaladaha amniga aasaasiga ah oo ay la socdaan kumbuyuutaro qarsoodi ah iyo cutubyo sireed si ay u bixiyaan difaac kombiyuutar aasaasiga ah.
Tani waa software caalami ah oo lagu ilaaliyo kombiyutarkaaga iyo hagaajinta waxqabadka adoo dejinaya dhibaatooyinka nidaamka.
G Data Antivirus – softiweer taageersan farsamooyinka amniga caqliga leh iyo teknolojiyadda dhaqanka si looga ilaaliyo kombiyuutarkaaga fayraska.
Tani waa software antivirus leh heer aad u sarreeya oo lagu ogaado fayrasyada iyo nadaafada, kaas oo si firfircoon u ilaalinaya kombuyuutarka waqtiga dhabta ah.
Aasaaska Amniga Microsoft – softiweer ah borotokoolka buuxa ee Microsoft. Antivirus-ka wuxuu ka ilaaliyaa nidaamka fayraska noocyada kala duwan, spyware, iyo hanjabaadaha kale.